Inkontileka yokusayina irekhodi likaNapoli umgadli waseNigeria uVictor Osimhen - teles
Inkontileka esayina irekhodi lokuqoshwa komgadli waseNigeria uVictor Osimhen
Iqembu lase-Italy uSerie A uNapoli ukuqinisekisile ukusayinwa komgadli osemncane waseNigeria uVictor Osimhen oqhamuka ekilabhini yaseFrance uLille.
Iwebhusayithi kaNapoli inikeze imininingwane embalwa ngalesi sivumelwano, imane yathi: “AbakwaSSC uNapoli bayakujabulela ukumemezela ukusayina kukaVictor Osimhen waseLille ngokudluliswa unomphela. "
Ngokusho kwephephandaba lezemidlalo laseFrance i-L'Equipe, isivumelwano sibaluleke ngaphezu kwama- $ 96 million (ama-81,3 million), okumenza abe umdlali obiza kakhulu e-Afrika ngasiphi isikhathi.
Manje uNapoli usekhokhele okungaphezulu kohlangothi lwamaNgisi ukuthi i-Arsenal ikhokhele eLille ngoNicolas Pepe waseCôte d'Ivoire kukhona unyaka.
U-Osimhen wayejoyine uLille waseCharleroi eBelgium ukuthatha isikhundla sikaPepe.
Ngemuva kokushaya amagoli angama-18 kuyo yonke imiqhudelwano eLille ngesizini edlule, lo mdlali oneminyaka engu-21 ubudala uxhume amasonto ambalwa noNapoli.
NgoJuni kwaba uqambe uLille umdlali wesizini phakathi nomkhankaso wakhe wokudlulela eFrance, kanti umNigebi wabizwa futhi eqenjini leLigue 1 lesizini.
U-Osimhen wagqama kakhulu kwiNdebe Yomhlaba wonke ka-17 engaphansi kuka-2015 eChile, wawina umklomelo weGolden Boot neSilver Ball ngenkathi ihola iGolden Eaglets kusihloko.
Lo mfundi oneminyaka engu-16 ushaye irekhodi lomqhudelwano wamagoli ayi-10, washaya umdlalo ngamunye eNigeria, umdlalo owamtholela umklomelo weYoung African Player of the Year ka-2015.
Ukwenza kwakhe kahle kule Ndebe Yomhlaba nakho kumenze wathuthela eWolfsburg, kodwa u-Osimhen, owenqabayo i-Arsenal kokudlala kwiGundesliga yaseGerman, uvumile ukuthi wazabalaza njengoba ejwayela kancane kancane kwiligi nebhola laseYurophu.
Ngemuva kwesizini engenazithelo lapho umgadli olimele ehlulekile ukufaka amaphuzu emidlalweni engu-16, wathuthela eBelgium lapho izinhloso zaphela ngokushesha - engu-19 emkhankasweni wakhe wokudonswa kwemali eCharleroi, lapho ekuqaleni ubolekwe ngaphambi kokwenza isinyathelo saphakade.
Lo mbhalo uvele okokuqala ku: https://www.bbc.com/sport/africa/53609226
I-DR Congo ibhikisha ngemuva kokushona kwamasosha angama-13 adakiwe
I-Arsenal ijabule ngomdlalo wamanqamu wangoMgqibelo weHeads Up FA